सानो चालको साथ उबन्टु १ little.०14.04 सुरु गर्नुहोस् ग्याजेट समाचार
उबुन्टु १.14.04.०XNUMX अपरेटि system प्रणालीको उत्कृष्ट संस्करण हो, जुन हालसालै लोकप्रिय भएको छ स्थिरताको कारण; तर के हुन्छ जब अपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप चलाउन धेरै समय लाग्छ?
कुनै पनि लिनक्स अपरेटिंग सिस्टमका अनुयायीहरूका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प हो जुन माईक्रोसफ्टको भन्दा धेरै छ, जुन सुरुमा देख्न सकिन्छ, केही यस्तो विन्डोजको कुनै पनि संस्करण भन्दा धेरै छिटो छ। जे भए पनि, यदि कुनै पनि समयमा हामीले धेरै संख्यामा एप्लिकेसनहरू स्थापना गरेका छौं, यसले उस्तै प्रभावहरू निम्त्याउँदछ जुन हामी यसको प्रतिस्पर्धी अपरेटिंग प्रणालीहरूमा प्रशंसा गर्दछौं। यस कारणका लागि, हामी अब प्रक्रियालाई संकेत गर्नेछौं जुन पछ्याउनुपर्दछ जब यो अझ बढी सुविधाको लागि आउँदछ, उबुन्टु १ 14.04.०XNUMX को स्टार्टअप, केहि फरक जुन यसबाट धेरै फरक हुन्छ। विन्डोजमा पछ्याईएको प्रक्रिया.
उबन्टु १.14.04.०XNUMX मा पछ्याउन क्रमिक चरणहरू
त्यो मान्दै हामीसँग हाम्रो कम्प्युटरमा उबुन्टु १.14.04.०XNUMX छ एक कार्यरत अपरेटिंग प्रणाली को रूप मा, अब हामी को लागी प्रयास गर्न को लागी केहि चरणहरु सुझाव दिनेछौं छिटो सुरु हुने गति पाउनुहोस्, त्यस्तो चीज जुन अनुसरण गर्न धेरै सजिलो छ र कुनै पनि समयमा, हामीले यसको सम्बन्धित विन्डोमा "कमाण्ड टर्मिनल" प्रयोग गर्नुपर्नेछ, केहिलाई डराउने कारक यसको निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा अज्ञात छ भन्ने तथ्यका कारण; हामी पाठकलाई हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्न निम्न अनुक्रमिक चरणहरू अनुसरण गर्न सल्लाह दिन्छौं:
उबुन्टु १.14.04.०XNUMX स्टार्टअप। पछ्याउनु पर्ने पहिलो चरण सहि ठ्याक्कै यो हो, कि हामीले अपरेटिंग प्रणाली सुरु गर्नुपर्नेछ यो पूर्ण नभएसम्म।
खोजी विकल्प। अब हामीले माथिको देब्रे आईकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ जसले हामीलाई हाम्रो आवश्यकता खोजी गर्न अनुमति दिनेछ।
स्टार्टअप अनुप्रयोगहरू। स्पेस देखा पर्नेछ जहाँ हामीले कम्प्युटरमा रहेको उबन्टु १ 14.04.०XNUMX संस्करणको भाषामा आधारित "स्टार्टअप अनुप्रयोगहरू" वा "स्टार्टअप अनुप्रयोग" लेख्नुपर्दछ।
प्रकार्य चयन। एकल परिणाम यसै क्षणमा देखापर्नु पर्छ, एउटा आईकन जुन हामीले चयन गर्नुपर्दछ किनकि यो operating एप्लिकेसनहरूको समूहसँग सम्बन्धित छ जुन अपरेटिंग सिस्टमको सुरूमा कार्यान्वयन हुने »।
हामी के गर्छौं र के प्राप्त गर्छौं भनेर व्याख्या गर्न हामी एक छिन रोक्नेछौं। "कमाण्ड टर्मिनल विन्डो" कल नगरीकन, धेरै सजिलो र सरल तरिकामा हामी तिनीहरू दर्ता भएको ठाउँमा पुग्यौं। उबंटु १.14.04.०XNUMX को साथ सुरू हुने ती सबै अनुप्रयोगहरू, तिनीहरू ठूलो संख्यामा हुन सक्दछन् यदि यदि हामीले आफैंलाई अन्धाधुन्ध स्थापना गर्न आफूलाई समर्पित गर्यौं।
यसै घडीमा हामी पहिले नै एउटा सानो निष्कर्षमा पुग्न सक्दछौं, र त्यो यो हो कि यदि त्यहाँ देखाइएका अनुप्रयोगहरूको संख्या ठूलो सूचीमा समावेश छ भने, उबुन्टु १.14.04.०XNUMX धेरै समय लिने कारणको औचित्य प्रमाणित गर्दछ पूर्ण सुरु गर्न। हाम्रो प्रक्रियाको दोस्रो भागमा, हामी क्रमबद्ध गर्दा हामीले के गर्नुपर्दछ सूचित गर्दछौं, एकै समयमा एक कार्यान्वयन भयो वा हुँदैन।
उब्न्टु १.14.04.०XNUMX को साथ सुरु हुने अनुप्रयोगहरूको सूची समीक्षा गर्नुहोस्।
अनुप्रयोगको बक्स चयन गर्नुहोस् जुन पछि कार्यान्वयन हुन कम महत्त्वको हुन्छ।
बटन क्लिक गर्नुहोस् हटाउने काम यदि हामी अपरेटिंग प्रणालीको साथ चलाउनको लागि अनुप्रयोग चाहँदैनौं।
बटन क्लिक गर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस् एक विशिष्ट अनुप्रयोगले चल्ने तरीकालाई परिवर्तन गर्न।
यी सबै प्रबन्ध गर्दा माथि उल्लिखित चरणहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् Ubuntu १.14.04.०XNUMX को साथमा चलाउने अनुप्रयोगहरू; ती मध्ये पहिलो केवल सूचीबाट हामीले चाहेको अनुप्रयोगलाई हटाउनेछ, जसले स that्केत गर्दछ कि हामीले यसलाई म्यानुअल तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ यदि कुनै पनि समयमा हामीलाई काम गर्न आवश्यक छ भने।
अन्तिम विकल्पले हामीलाई विश्लेषणको लागि एक धेरै रोचक विकल्प प्रदान गर्दछ; बटन क्लिक गरेर «सम्पादन गर्नुहोस्»हामीसँग एक विशिष्ट अनुप्रयोग अर्डर गर्ने सम्भावना हुनेछ, जुन यो एक निश्चित समयको लागि "निदाउँछ"।
त्यहाँ हामीले २० सेकेन्ड समयको अवधि लियौं, जस पछि अनुप्रयोग स्वचालित रूपमा सुरु हुनेछ। हामीले सुझाव गरेका यी सबै तरिकाहरूका साथ हामीसँग हाम्रो कम्प्युटरमा सुरू हुँदा उबन्टु १ 14.04.०XNUMX छिटो हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » हाम्रो कम्प्युटरमा उबुन्टु १.14.04.०XNUMX को स्टार्टअपलाई कसरी गति दिने